Planegbọ elu Montenegro nke nwere mmadụ 90 nọ n'ụgbọelu na-efeda na mberede na Russia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Planegbọ elu Montenegro nke nwere mmadụ 90 nọ n'ụgbọelu na-efeda na mberede na Russia
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Montenegro • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Moscow Ndị ụgbọ elu Montenegro forcedgbọ elu YM610, nke bu ndị njem 85 na ndị ọrụ ya ise, manyere ịgbanwe ụzọ ya wee mee njem mberede mgbe onye ọkwọ ụgbọ elu ya na-arịa ọrịa ma tụbọọ mgbe ụgbọelu na-agbadata.
Gbọ elu ahụ nke mmadụ iri itoolu n'ụgbọelu si Tivat n'ụtụtụ Wenesde wee gawa Moscow Ọdụ ụgbọ elu Domodedovo. Mana mgbe ọ na-agbadata Fokker 100 nke ụgbọ elu dị etiti kwupụtara ihe mberede wee banye ya Kaluga, obodo dị na ndịda Moscow, ihe dịka 135km site na ebe mbụ ọ gara.
Ntughari a bụ n'ihi ihe mberede ahụike n'etiti ndị ọrụ ahụ. "Onye ọkwọ ụgbọelu mbụ ahụ tụbọrọ" n'etiti ụgbọ elu, ndị mgbasa ozi Russia kwuru, na-ekwu maka ọrụ mberede.
Dị ka akwụkwọ akụkọ si kwuo, ihe mere mgbe ụgbọelu ahụ malitere ịrịda ka ọ na-eru Moscow.
Ntọala ahụ gara nke ọma, ọdụ ụgbọ elu ahụ gosipụtara, ya na ndị njem niile na ndị ọrụ nọ na bọs ga-akwụsị. Ọtụtụ ụgbọ ihe mberede bugara ebe ahụ. Onye ọkwọ ụgbọelu ahụ nwetara mmụọ mgbe ọ rutere.
Akụkọ ndị gara aga gosiri na ọkwọ ụgbọelu ahụ nwere nkụchi obi mana ndị ọrụ ahụike ekwenyeghị nke a. Nwoke ahụ "anaghị achọ ụlọ ọgwụ ma a ga-ezighachi ya n'ọdụ ụgbọ elu," ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọgwụ ahụ kwuru.